सविधानमा हामी आफ्नो अनुहार खोजेका छौ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » सविधानमा हामी आफ्नो अनुहार खोजेका छौ
सविधानमा हामी आफ्नो अनुहार खोजेका छौ
Suresh Yadav Monday, October 5, 20150No comments
महासचिव, सद्भावना पार्टी
तपाईहरु आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ यता वार्ता पनि शुरु गर्नुभएको छ, यसको तारतम्य कसरी मिलेको छ ?
–पहिलो कुरा त हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ । र, यो आन्दोलन राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको छ । अन्ततः यो वार्ता, संवाद र छलफलबाट नै टुगिने हो । सधै आन्दोलन गरेर पनि हुँदैन । कुनै नकुनै विन्दुमा गएर वार्ता गर्नैपर्छ । वार्ताबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । चाहे त्यो आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएर राज्यलाई घुँडा टेकाएर वार्ता होस् वा आन्दोलनको आधारभूत माग पुरा भएपछि सेफल्याण्डिगंका लागि गर्ने वार्ता होस् । वार्ता त आखिर गर्नै पर्छ । एमाओवादीले १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरे । उनीहरुले जनयुद्धबाट नै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको होला । त्यो अनुसारको अभ्यास पनि गर्यो । तर अन्ततः उनीहरुलाई पनि वार्ता नै गर्नुपर्यो । जबकि उनीहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थिएन । हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ । एक दिन नएक दिन वार्तामा आउनै पर्छ । वार्ता गर्नैपर्छ । त्यसैले हामी अहिले आन्दोलनमा पनि छौ र वार्ताको वातावरण बनाउन अनौपचारिक वार्ता पनि गरिरहेका छौ । तर हामी सार्थक वार्ताको पक्षमा छौ । वार्ताको नाममा आन्दोलन कमजोर गर्ने । आन्दोलन तुहाउने कुराप्रति हामी सचेत छौ ।
त्यसो भए यो वार्ताले कस्तो रुप लिन्छ ?
–वार्ता सार्थक वा निरर्थक कस्तो हुने हो त्यसको जिम्मेवारी राज्यका हो । सरकारले हामलिाई भदौ १२ गते वार्ताका लागि पत्र पठायो । हामीले वार्तामा बस्न तयार छौ तर त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ भन्दै चार वटा शर्त पठायौ । यी चार शर्त पूरा गरेपछि मात्र हामी औपचारिक रुपमा वार्तामा बस्छौ । अहिले ती चार शर्तमाथि छलफल भइरहेको छ । सुनेको छु, शर्तप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको छ रे । तपाईसँग यो कुरा गरिरहँदा चार शर्तमा सरकार पोजेटिभ रहेको छ । अब वार्ताको वतावरण तयार भएपछि औपचारिक वार्ता शुरु हुनसक्छ । हामीसँग वार्ता भएपछि भएको सम्झौतालाई सविधानमा कसरी समावेश गराउने हो त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । सविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने हो कि सविधान पुनस्थापना गर्ने हो कि सविधान संशोधन गर्ने हो त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । हामीले चाहेको कुरा सविधानमा आउनुपर्छ त्यति हो ।
तपाईहरुले त पहिला पनि ८ बुँदे सम्झौता गरेर सविधान संशोधन गराउनु भएको थियो तर, सविधानमा लेखिएका कुरा अहिले लागु भइरहेका छैन भने पुनः सविधान संशोधन गरेपछि त्यो लागु हुन्छ कि हुँदैन त्यसको के ग्यारेण्टी हुन्छ ?
–पक्कै पनि राज्यले हामीलाई धोका दिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्ष गरेको र सविधानमा पनि त्यसलाई रोखेको कुरा अहिले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन भने स्वभाविक हो अहिले विभिन्न शंका उपशंका गर्ने । तर, सविधान संशोधन गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास राज्यले दिलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो तिर एउटा भनाई छ नि कि ‘डेस लगैछै त बुइद्ध बरहैछै’ । एक पटक धोका खाई सकेको मान्छे पटक पटक धोका खाँदैन ।
तपाईको अध्यक्षले त अबको वार्ता मधेशमै हुनुपर्छ, वार्ता सफल नभएसम्म काठमाडौ फर्किन्न भन्नु भएको छ तर वार्ता त काठमाडौमै भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
–वार्ता कहाँ गर्ने विषयमा संयुक्ता लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा कुनै मतभेद छैन । वार्ता कुनै पार्टीले होइन, मधेशी मोर्चाले गर्नेछ । मधेशमै वार्ता गर्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो, विचार हो तर मधेशी मोर्चाको होइन । अर्को कुरा, समाजशास्त्रले के भन्छ भने जुन ठाउँमा बसेर तपाई वार्ता गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसैले अहिले मधेशको अधिकारका लागि मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । यसका लागि मधेशमै वार्ता भयो भने झन राम्रो । यद्यपी वार्ता हुनुपर्छ र सार्थक वार्ता हुनुपर्छ ।
तपाईको पार्टीले मधेशमै वार्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छन् भने यदि मधेशी मोर्चाले काठमाडौमा वार्ता गर्यो भने त्यसलाई तपाईका पार्टीका अध्यक्षले स्वीकार गर्नुहुन्छ त ?
–मैले अघि नै भनिसके कि वार्ता मधेशमै हुनुपर्छ भने इच्छा र चाहना हाम्रो पार्टीको रहेको छ । तर मोर्चाले काठमाडौमै हुनुपर्छ वा अरु कतै हुनुपर्छ भनि निर्णय गर्यो भने आफ्नो पार्टीले पनि स्वीकार गर्छ तर वार्ता सार्थक र आफ्नो पार्टीले उठाएका एजेण्डसँग मिल्ने गरी हुनुपर्छ ।
मधेशी मोर्चामा चार दल रहेका छन् तर अहिले वार्तामा महन्थ ठाकुर मात्र बस्नु हुन्छ अरु पार्टीलाई त्यसमा किन राखिएको छैन ?
–यो औपचारिक वार्ता होइन । वार्ताको वातावरण मिलाउने यसो गफगाफ भएको मात्र हो । यसलाई पत्रकारिता भाषामा अनौपचारिक वार्ता भन्दा पनि हुन्छ । मधेशी मोर्चाकै तर्फबाट ठाकुरजीलाई अनौपचारिक वार्ताका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । वार्ताको वातावरण बनेपछि सरकारले मधेशी मोर्चालाई यी यी शर्त स्वीकारीएको भन्दै वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने छ । त्यस पछि मात्र वार्ता शुरु हुन्छ । अहिले त गफगाफ मात्र भइरहेका छन् । वार्ता हुन्छ कि हुँदैन, के के विषयमा वार्ता गर्ने, कस्तो वार्ता गर्ने, कहाँ गर्नेलगायतका विषयमा छलफल मात्र भइरहेको छ ।
त्यसो भए वार्ताको बटमलाइन के हो त ?
–सविधान मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा उत्पीडित समुदायको पक्षमा बन्दैन भने कुराको आभाष हामीलाई पहिलादेखि नै थियो । त्यही अभास पाएर हामी शुरुदेखि आन्दोलनमै छौ । दोस्रो सविधानसभा गठन भए लगतै हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौ । गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गर्यौ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको अगुवाई गर्नु भएको थियो तर जब प्रचण्डले पनि काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर जेठ २५ गते १६ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीप्रति विश्वास टुटियो । विश्वास गर्ने कुनै आधार रहेन र हामी आफ्नो तरिकाले मोर्चा गठन गरेर अगाडि बढ्यौ । मधेशी जनताको दवाव थियो मधेशवादी दलहरु सविधानसभा त्यागेर मधेशमा आउन् र सँगै बसेर आन्दोलन गरुन् । जनताको भावना बुझेर हामी सविधानसभाबाट राजिनामा दियौं । अरु मधेशी, अदिवासी जनजाति, मुस्लिमले सविधान निर्माण प्रकृया नै बहिष्कार गरे । तैपनि उनीहरुले जवर्जस्ती सविधान जारी गरे । हामीले त्यो ससिवधान अस्वीकार गर्दै त्यसलाई जलायौ पनि । त्यसले सविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रस्तावमा मधेश आन्दोलन उल्लेख हुनुपर्छ, नागरिकतामा संघीय कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने, समावेशी समानुपातिको ग्यारेण्टी सविधानमै हुनुपर्ने, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने यी र यस्ता थुप्रै विमतीहरु सविधानमा रहेका छन् । यो सविधानलाई पुनःलेखन गरेर, परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर के गरेर हुन्छ हामीले राखेका मागलाई त्यसमा समाधान गर्नुपर्छ ।
यताका धाराहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्नु भएको छ के यो सम्भव छ ?
–त्यो काम त सरकारको हो । तीन दलका नेताहरुले जसरी चारैतिरको विरोधका वावजुद ह्वीप लगाएर सविधान जारी गर्नु भयो । त्यसरी नै ह्वीप लगाएर भएपनि, मार्सल लगाएर भएपनि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ, वा पूनर्लेखन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ के के गर्नुपर्छ ती सबै गर्ने काम उनीहरुको हो । उनीहरुको सम्पर्कमा महान्यायधिवक्ता छन्, प्रधानन्यायधिश छन्, सर्वोच्च अदालत छन्, अर्थात सारा सयन्त्र छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन उनीहरुलाई कुनै समस्या हुने छैन । हामीले आफ्नो अनुहार देखिने गरी, हामीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी, हामीले आफ्नो भावना समेट्ने गरी सविधान जारी भएको देख्न चाहन्छौ । भोली गएर सम्झौता भएपछि यसले मानन्, उसले मानेन, यो भयो त्यो भयो भन्न मिल्दैनन् । सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने काम उसको हो ।
तपाईहरु अहिले भारत नेपाल सीमाको पूरै नाका ठप्प पार्नु भएको छ । त्यो अलिकति विवाद पनि आयो । राज्यले यो भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भनि रहेका छन् यथार्थ के हो ?
–हामीले शुरुदेखि सडक आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन गरिरहियौं । हाम्रो प्राथमिकता शुरुदेखि नै सडकजाम गर्नु थियो । नाकाबन्दी गर्नु थियो । यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेमध्येमा १० जना नाकाबन्दी गर्नमै ज्यान गुमाएको छ । राजमार्ग शुरुदेखि नै अवरोध गरेर काठमाडौलाई दानापानी रोक्नमै सघर्ष गरेका थियौ तर प्रहरीले ट्रक छुटाउने नाममा, जाम खोलाउने नाममा प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेको थियो । दमन गर्न थाल्यो । आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्न थाल्यो त्यसैले हामी बाध्य भएर नाका नै जाम गर्ने गरी नाकामा धर्नामा बस्यौं । जो निकै कारगर भयो । र, राज्यलाई झुक्न बाध्य बनायो । त्यो नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर अहिले राजधानीमा देख्न सकिन्छ । उपत्यका बन्द जस्तो अवस्था सृजना भएका छ । गाडी कम गुड्न थालेको छ । स्कूलहरु बन्द हुन थालेको छ । कलकारखाना बन्द हुन थालेको छ । खद्यान्न पाउन छाडेको छ । पाएपनि महँगो पाउँछ । यो विशुद्ध रुपमा मधेशी मोर्चा मोर्चाको कार्यक्रम हो । यसमा भारतलाई जवर्जस्ती तान्ने प्रयास गरेको छ ।
भारतलाई तान्ने प्रयास किन गरेको छ त ?
–भारतले शुरुदेखि नै नेपाललाई जानकारी गराउँदै आएको छ कि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण विहारमा हुने चुनावमा सुरक्षाको खतरा बढेको छ । यसमा ध्यान दिनुहोस् । आन्दोलनले गर्दा मालसमान लिएर चालकहरु, व्यपारीहरु नेपाल जान डराई रहेका छन् यसमा विचार गर्दिनुस् भन्दा नेपालले कहिले सिरियस लिएन । बरु आन्दोलनकारीमाथि दमन गरे । मान्छे मार्न थाले त्यसले गर्दा झन सुरक्षा चुनौति बढ्दै गयो । र, यसको बारेमा भारतले चिन्ता जाहेर गरेर पटक पटक नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर मधेशवादी दलले गरेको आन्दोलनलाई भारतको टाउकोमा थुपार्यो । सुरक्षाको चासो देखाउनु भारतले गल्ति गरेको हो त ? आफ्नो राज्यको बारेमा सुरक्षाको चासो देखाउनुले नै नेपाल सरकारले भारतले नाकाबन्दी लगायो रे भन्नि हल्ला फैलायो ।
तपाई यस्तो भन्नुभएको छ, तर सीमा नाकामा बस्ने आन्दोलनकारीलाई भारतीय व्यक्तिले खाना खुवाई रहेका छन्, उद्योगीहरुले सहयोग गरिरहेका, भारतले सेल्टर दिएका छन् भनि आराप छ नि ?
–हाम्रो ससुराली छ भारतमा, हाम्रो मामा घर छ भारतमा, भारतमा भाइको विहे भएको छ, बहिनीको विहे भएको छ । हामी दिनहुँ भोज भेतेर खान्छौ । तिर्खा लाग्दा हाम्रा आफन्तले पानी लिएर आउनु हुन्छ । सानो तिनो भोज हुँदा पनि हामी सँगै बसेर खान्छौ । अहिले त्यस्तै भएको छ । हामी पीडामा छौ । हामी लडाईमा छौ । हामीलाई हाम्रा आफन्तले पानी खुवाई रहनु भएको छ । भात खुवाई रहनु भएको छ । ती खुवाउनेहरु हाम्रा भान्जा हुन्, हाम्रा नाना हुन्, हाम्रा मामा हुन् । त्यसैले मेरा आग्रह छ कि यसलाई यसै रुपमा बुझि दिनुपर्छ । त्यहाँ कुनै सरकारले, कुनै पार्टीले वा ब्यूरोक्राइटसले भात खुवाई रहेको छैन । हाम्रा आफन्तहरु हुन् । यसलाई भारतको समर्थकको चश्माले हेर्दा निरर्थक हुन्छ ।
सविधान निर्माणसँगै अब सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने चहल पहल बढेको छ यता तपाईहरुसँग वार्ता पनि शुरु भएको छ, वार्ता सफल भयो भने सरकारमा जाने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ?
–हाम्रो पार्टी सद्भावना पार्टीले सविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदबाट राजिनामा दिइसकेका हुनाले सरकारमा जाने कुरा धेरै टाढाको कुरा भइसक्यो । अरु दलको हकमा पनि उनीहरुले सविधानसभा बहिष्कार गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा जाने कुरा सोच्ला भने जस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा, यो मधेश आन्दोलनको एजेण्डा सत्ता होइन । मधेशी जनताले सरकारमा जान भनिरहेका छैन ।
तपाईका पार्टीका सभासद् अर्थात संसदले सविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदबाट राजिनामा दिनुभएको छ तर राजिनामा स्वीकृत भएको छैन । व्यवस्थापिका संसदमा अहिले पनि काउन्टिगं भइरहेको छ यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–कसैले राजिनामा दिएका छन् भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेछ कि छैन भने चिन्ता राजिनामा दिनेले सोच्दैन । राजिनामा दिनेले दिन्छ त्यसलाई स्वीकृत गर्ने नगर्ने काम माथिल्लो निकायको हुन्छ । राजिनामा दिने कुरा दिई सक्यो अब फिर्ता लिने वा पुनर्वाहाली हुने कुरा हुँदैन । हाम्रो पार्टीका संसदले प्रकृया पुर्याएर राजिनामा दिनुभएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्छ कि गर्दैनन् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।